Noma siyakhuluma sekungamahubo - Bayede News
Akuyona imfihlo ukuthi ubuciko bokucula kuleli sebuyakhalisa. Lokhu kulishwa ngoba kwake kwakhona isikhathi lapho sabe saziwa ngengoma. Leso sikhathi sabe sihlobe hhayi kuphela ngabantu abanamaphimbo amtoti kepha babephiwe nasekubhaleni umculo loyo. Ngaleso sikhathi umculo wabe uwumyalezo, uyizifundiso ngempilo, uthando njalo njalo. Abanye babeze basho bathi umculo uyabelapha noma bathi uwukudla komphefumulo.
Manje sisesikhathini lapho ezinye izinto sezibiwa ngomculo nabakwenzayo sebebizwa ngabaculi noma amaciko. Akusekho ukuzinika isikhathi sokupheka umlayezo bese umuntu eqopha. Sekuthathwa nje imilolozelo le esikhule ngayo namahubo ayehlatshelelwa ngogogo kuthiwe umuntu-ke osefudumeze lokho useshayile, usengabizwa nangeciko adle nemihlanganiso.
Nokho yize kunjalo kukhona umkhakha okubukeka usekhona okwenzayo kubantu lona ngowamahubo. Yize unomlando omude kepha okwamanje ubuso bawo kuseliciko, uMbuso Khoza. Okuba kuhle ngoMkhathini wukuthi lokhu ahuba ngakho uyakulandela acoshe umlando wakho okwenza olalele angagcini ngokugiya nje kuphela kepha acoshe nomphako lapha ngasemlandweni. Muva nje wenza imigidi efundisayo njengeSifundo ngempi enkulukazi yaseSandlwana nayenza eGoli. NeTheku akalishiyanga nonyaka ngoba ngoSuku lwe-Afrika uzobe elapha enza iJadu le-Afrika. Sikhala impela kepha okwenziwa nguKhoza kuthi kithi thokola themba.